Nepali | News Filmy | Page 25
आकन्क्षा र प्रणयको स्वरमा ‘बिति जाने’ सार्बजनिक ( भिडीयो )
January 17, 2018 8:03 am
स्याड भर्सनको म्युजीक भिडीयो ‘बिति जाने’ सार्बजनिक भएको छ । सार्बजनिक गीतमा आकन्क्षा बस्याल र प्रणय काडीको स्वर सुन्न सकिन्छ । गीतमा शब्द तथा संगीत समेत गायक काडी आफैले भरेका छन् । गायीका बस्यालले केही साता अघि मात्र ‘तिमीलाई छुदै’ बोलको गीत बजारमा ल्याएकी थिइन् भने गायक काडी चाडै प्रेम दिवसको गीत लिएर आउदैछन् । read more
नाच्न जान्नु मात्र हिरोमा हुने तत्व हैन त्यो कुरा छवि ओझा जस्ता मेकरले कहिले बुझ्लान यहाँ ? हो हिरो छनोटमा निकै कम्प्रमाईज गर्दै छवि ओझाले बनाएको नयाँ फिल्म मंगलमको दोश्रो गीत हेर्दा हिरो माथि प्रश्न उठाउँने ठाउँ धेरै देखिएको छ । अभिनय र नृत्यमा निकै पोख्त रहेकी हिरोइन शिल्पा पोखरेलसंग एउटै फ्रेममा पृथ्वी राज प्रसाईलाई read more
प्रदीप खड्काको नयाँ फिल्मको गीत बाहिरियो : लोकेशन बबाल देखियो
प्रदीप खड्काको नयाँ फिल्म लिलि बिलीको गीत रिलिज भएको छ । बैशाखको छेकोमा प्रर्दशन हुने लिलि बिलीमा प्रदीपले यस पटक पनि नयाँ हिरोइन जसिता गुरुङ सगं पेयरअप गरेका छन् । मिलन चाम्स निर्देशित यस फिल्मको सार्वजनिक गीतलाई कविराज गहतराजले कोरियोग्राफ गरेका हुन भने सिनेमाटोग्राफी चाँहि सुदीप बरालको हो । गीतका कम्पोजर एलिश कार्की हुन भने read more
सार्बजनिक भयो ‘तिम्रै लागि’ ( भिडीयो )
January 1, 2018 11:50 am
अस्ट्रेलियामा छायाकन गरिएको म्युजिक भिडीयो ‘ तिम्रै लागि‘ सार्बजनिक भएको छ । बिक्की श्रेष्ठको शब्द ,संगीत र स्वर रहेको म्युजीक भिडीयोलाई निर्देशन भने जिबन रसाइलीले गरेका हुन् । भिडीयोमा छायाकन र सम्पादन समेत निर्देशक रसाइलीकै समाबेस छ । प्रेम र बिछोडको कथा बोकेको गीतमा बिक्की श्रेष्ठ र रुसा कर्माचार्यको अभिनय देख्न सकिन्छ।पछिलो समय अस्ट्रेलियामा म्युजीक भिडीयो निर्माण हुने क्रम निकै बढीरहेको छ ।
बटरफ्लाईको Director’s Song मा यस्तो देखिए प्रियंका र आर्यन
पौष २८ देखि प्रर्दशनमा आउँन लागेको फिल्म बटरफ्लाईको टाइँटल ट्रयाक भिडियो रिलिज भएको छ । प्रियंका कार्की र आर्यन अधिकारी लिड रोलमा रहेको उक्त फिल्मको सार्वजनिक गीतलाई अर्को भाषामा भन्नू पर्दा Director’s Song पनि भनिन्छ । कोरियोग्राफरको सहायता विनानै अथवा कोरियोग्राफरको सामान्य सहयोगमा फिल्मका विभिन्न फूटेजहरुलाई जोडेर भिडियो गीत तयार गर्नुनै Director’s Song हो जुन गीत तयार गर्ने सम्पूर्ण read more
चलचित्र बिकास बोर्डले कलाकारलाई ट्रेनिङका लागि भारत पठाउँने
चलचित्र बिकास बोर्डले फिल्म अभिनयमा रुची राख्ने कलाकारहरुलाई भारतको पुने स्थित भारतीय फिल्म और टेलिभिजन संस्थान (FILM & TELEVISION INSTITUTE OF INDIA – FTII) मा अभिनय सम्बन्धी विशेष ट्रेनिङमा पठाउँने घोषणा गरेको छ । आज जारी प्रेस विज्ञप्ती अनुसार भारतीय राजदुतावास संगको सहकार्यमा स्क्रीन अभिनय फाउण्डेशन कोर्शका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो । जारी रिलिज अनुसार read more
रेखालाई फापेन गएका २ बर्ष : आउँदो बर्ष हिरो रिर्टन्स् के होला ?
December 25, 2017 6:13 pm
पछिल्लो दुई बर्ष यता राष्ट्रिय राजनीतिमा अलमलिएसंगै रेखा थापाको फिल्मी करिअरमा पनि कालै बादल लाग्न पुग्यो । कालो बादल भित्र रोमलिदा रेखाले अभिनय गरेको मात्र हैन आफैले निर्माण गरेको फिल्मले पनि बक्स अफिसमा उत्सहजनक ब्यापार गर्न सकेन । २०७२ साल चैत्र २६ गते रिलिज भएको होम प्रोडक्सनको फिल्म रामप्यारी पश्चात रिलिज भएका तीन फिल्मबाट उनले read more